Apple Accessories – ICT.com.mm
MagBak Wallet MagSafe Compatible (Nappa Black)K149,000 K132,000-12%
Spigen 40W Dual USB C Wall Charger (PE2013UJ)K103,000 K92,000-11%
UGREEN Wireless First Charging 10W/7.5W/5W (Black) ED032-60470K34,300 K14,000-60%
MagBak for iPhone 12 Pro (6.1”) +2MagSticks MagSafe Compatible (Black)K180,000 K165,000-9%
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ USB C Charger, Input 100-240V~, 50/60Hz, 1.20A MAX USB-C Output Single Port Use 30W Max for each port(Port 1/Port2: 5.0V 3.0A, 9.0V 3.0A, 12.0V 2.52A)...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ULTRA THIN. Only 0.02 inches thin. No bulk. One of the thinnest iPhone 12 Pro cases on the market that helps you maintain the original beauty of...
OtterBox Commuter Series Case for iPhone 12 & iPhone 12 Pro 6.1inches (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Compatible with iPhone 12 & iPhone 12 Pro Lasting antimicrobial technology helps protect case exterior against many common bacteria. It does not protect you or the screen...